Pelisdroid tsara, ny fampiharana tsara indrindra hijerena sarimihetsika maimaim-poana | Androidsis
Miverina izahay miaraka amin'ireo rindranasa tianao be ireo ary tsy afaka manohitra ao amin'ny Google Play Store izahay, amin'ity tranga ity dia ho ahy sy ho an'ny maro izany. ny fampiharana tsara indrindra hijerena sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Android na amin'ny alàlan'ny Google Chromecast, mpilalao mifanentana na fifandraisana DLNA.
Ny fampiharana dia tsy misy hafa fa pelisdroid, manokana ny kinova farany misy amin'ny endrika apk, izay mitondra ny anarana hoe Pelisdroid S2 manolotra antsika ny mety mijery sarimihetsika mivantana mivantana amin'ny Android, amin'ny alàlan'ny fitaovana Chromecatst sy mifanentana, fifandraisana DLNA na koa ampidino ny sarimihetsika ara-batana amin'ny Android -ntsika mba hijerena azy ireo ao amin'ny terminal ihany koa fa tsy mila fifandraisana mavitrika amin'ny tambajotra na hijery azy ireo koa amin'ny alàlan'ny Chromecast na DLNA. Avy eo, rehefa manazava amin'ilay horonantsary mifamatotra izay nanombohanay ity lahatsoratra ity aho, dia manazava ny fomba ahazoana maimaimpoana maimaimpoana ity kinova farany an'ny Pelisdroid S2 ity, ary koa ny zavatra rehetra atolotray ho anay fampiharana android manaitra ho an'ny android ity.
1 Avy aiza aho no misintona ny Pelisdroid S2?
2 Ahoana no fomba fametrahana ny rindranasa ofisialy Pelisdroid?
3 Izay rehetra omen'ny Pelisdroid S2 anay
Avy aiza aho no misintona ny Pelisdroid S2?
pelisdroid manana izany izahay mivantana avy amin'ny tranokalanao manokana amin'ny fipihana fotsiny io rohy io ihany. Avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny Pelisdroid dia hahafahantsika misintona kinova taloha iray an'ny fampiharana, hanavao izany amin'ny kinova farany izay nanovana ilay anarana ho Pelisdroid S2, rehefa manatanteraka an'ity kinova ity alefa voalohany amin'ny tranokalany manokana voalohany, dia hanafika antsika ny fampandrenesana hahafahantsika havaozy ny fampiharana amin'ny kinova farany misy.
Ahoana no fomba fametrahana ny rindranasa ofisialy Pelisdroid?
indray mandeha sintomina ny apk Pelisdroid Avy amin'ny tranokala ofisialiny, alohan'ny handehanana tsindrio ny fampandrenesana fampidinana mahomby, aloha dia tsy maintsy mandeha any amin'ny toe-javatra android sy amin'ny faritra Lock Screen sy fiarovana, kitiho ny safidy Loharano tsy fantatra hahafahanao mamela ny alalana ilaina hahafahana mametraka rindrambaiko ivelany amin'ny Google Play Store.
Izay rehetra omen'ny Pelisdroid S2 anay
Pelisdroid S2, izay ny fomba niantsoana ilay rindranasa tamin'ny fanavaozana farany azo zahana, avy amin'ny rindranasa tokana izay atolotra antsika a vahaolana feno hahafahana mijery sarimihetsika maimaimpoana avy amin'ireo terminal Android na ampitao aza ny atiny hilalaovana amin'ny fahitalavitra mifanentana amin'ny alàlan'ny fifandraisana DLNA na amin'ny alàlan'ny Chromecast na fitaovana mifanaraka aminy.
Avy amin'ny efijery lehibe an'ny Pelisdroid S2, hahazo miditra amin'ireo pejin-tranonkala rehetra atolotray antsika ireo izahay sarimihetsika maimaim-poana amin'ny alàlan'ny streaming video na koa ny mety hisintomana mivantana amin'ny endrika mp4 afaka mahita azy ireo isak'izay tiantsika tsy mila fifandraisana Internet miasa:
Ao anatin'ireny fantsona fizarana sarimihetsika maimaim-poana ireny dia hanana lisitry ny lohateny lehibe amin'ny fotoana rehetra isika, manomboka amin'ny ny vaovao farany amin'ny sinema iraisam-pirenena amin'ny fitondraana tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Amin'ny voalohany, rehefa miditra amin'ny fantsona manokana, ny zavatra voalohany haseho antsika dia mahafinaritra Lisitra toy ny kofehy mampiseho ny fonony amin'ireo sarimihetsika farany nanampy an'io fantsona io. Manana safidy azo atao ihany koa izahay hikarohana sarimihetsika resahina amin'ny alàlan'ny teny lakile, kisary miendrika fo mba hanampy sarimihetsika amin'ny lisitry ny tianao indrindra, fizarana hitantanana fampidinana mavitrika, na fizarana na fizarana mety ahafahana miditra mivantana amin'ny fisintomana vita.
Zavatra iray hafa tena tiako amin'ity fampiharana manaitra ho an'ny Android ity ny fananany izay rehetra ilainao mba hahafahanao mijery ny sarimihetsika mivantana amin'ny terminal Android anao na mandefa azy ireo amin'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny DLNA na Chromecast nefa tsy mila misintona rindrambaiko na fitaovana, na dia ny tiantsika hatao aza dia mijery mivantana amin'ny fahitalavitra misy sary mihetsika izay navoakanay niaraka tamin'ilay rindranasa.
Ka ho an'ireo safidy sy fampiasa rehetra ireo no nanazavako ny antony Pelisdroid S2 no fampiharana tsara indrindra hijerena sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » [APK] Pelisdroid S2 tanteraka, mampianatra anao izahay ny fomba fampidinana, fametrahana ary fampianarana momba ny fampiasana ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android hijerena sarimihetsika maimaim-poana
Cdsec Sec dia hoy izy:
Toa tsy dia etika loatra amiko ity lahatsoratra eo amin'ny pejy "matotra" ity. Tsy noheveriko fa te hanana mpihaino amin'ity karazana atiny ity ianao.
Mamaly an'i Cdsec Sec
Xiaomi dia manolotra ny Mi 5s miaraka amin'ny efijery HD Full HD 5,15 ", puce Snapdragon 821 ary RAM 4GB